Medellin inomuka pakati pevashanyi vekuNorth America
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Medellin inomuka pakati pevashanyi vekuNorth America
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Iyo Medellin Convention & Vashanyi Bureau inozivisa inoshamisa uye inoramba ichienderera kukura kwekushanya pamwe ne18 muzana inowedzera kune vafambi vanobva kuUS pakati paNdira naAugust wa2018, zvichienzaniswa negore rapfuura. Vanopfuura makumi mashanu nemakumi mashanu ezviuru zvevanhu vekuAmerica vakashanyira Colombia muna528,000, iyo 2017 105,735 yakashanyira Medellin, inomiririra 16 muzana yevakasvika. Guta rinozivikanwa reColombia rakaona shanduko inoshamisa munharaunda nemumaguta mumakore mashoma apfuura, uye ndiro guta rechipiri rakashanyirwa kwazvo munyika. Unyanzvi hunobuda nehunyanzvi hwetsika muLatin America, Medellin yakatanga kuva nzvimbo dzakasiyana siyana inokwezva vafambi nevano famba bhizinesi uye ichipa ruzivo rwakawanda.
“Medellin ine imwe yenyaya dzinosimudzira dzekudzikinura, ichinge yakunda nhoroondo yayo inonetsa seimwe remaguta ane njodzi pasi rose. Nhasi, iro guta rakazvigadzirisazve pacharo nekutarisana nehunyanzvi, hunyanzvi uye hunyanzvi. Vafambi vava kuwana guta rakadzika midzi mukuratidzira kwetsika nemimhanzi, kutamba, mabhuku, mitambo nezvimwe, "akadaro Ana Maria Moreno Gómez, Director weMedellin Convention & Visitors Bureau. Pakati pemashoko ekuvaka anovaka anosanganisira tango uye salsa madhanzi, mimhanzi yehip hop, uye masilleteros anozvipira kune hunyanzvi hwekuratidzwa kwemaruva, kunyanya panguva yeMedellin Flower Festival.
Gore rino, Medellin akaunganidza zvakatonyanya kuzivikanwa pasirese, izvo zvakabatsira zvakanyanya mukukura kwayo kwekushanya. Guta rakawana huwandu hwakazara makumi maviri nematatu kubva muzana kubva kune vekunze vanofamba kubva munaNdira kusvika Nyamavhuvhu. MunaNdira, yakahwina iyo 23 Vafambi 'Sarudzo Mubairo we'Pamusoro Mafambiro Ekuwedzera.'
Pamusoro pevafambi vezororo, vafambi vebhizimusi vakawedzera mukukosha uye guta richitambira avhareji yevafambi vebhizinesi mazana masere nematatu pagore kubvira 83,000, sekureva kweProColombia. Izvi zvinomiririra zvekushanduka kweguta, kunyanya mukati memusangano. Gore rega rega, Medellin inogadzira zviitiko zvepasi rose zvine mukurumbira kuve iyo Smart City Bhizinesi American Congress & Expo uye 2014th IPBES Plenary Assembly mu6, World Economic Forum yeLatin America mu2018 uye World Tourism Organisation General Assembly mu2016. .
Chimwe chikamu chakakosha cheMedellin ndeye vanotsvaga uye vari pamudyandigere. Colombia yakanyorwa seimwe yenzvimbo gumi dzepamberi dzekuenda pamudyandigere muna 10 neInternational Living. Zvinyorwa zvakare zvinoratidza 2018 muzana kuwedzera kweUS Social Security kubhadhara kuColombia muna85, zvichienzaniswa na2017, ichiita nyika yepamusoro muLatin America neCaribbean kugamuchira izvi, mushure meMexico. Ichi chidzidzo hachi sanganisi avo vakatorega basa, asi vasati vasvitsa zera rekugamuchira Social Security.
Kunyangwe kungoshanya kana kuchangotamiswa, iri guta remuguta rinopa zviitiko zvakanakisa zvekunyudzwa kwetsika uye zvakasikwa, pamwe nezviitiko zvinoenderera, padyo. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosheswa muguta nderekusarudzwa kwayo kwemamiziyamu senge Museum of Modern Art (ichangobva kugadziridzwa), iyo Museum yeAntioquia (ichangobva kugadziridzwa), iyo Museum yeYunivhesiti yeAntioquia neCasa de la Memoria Museum, multimedia ndangariro mamuseum inozivisa mhirizhonga yakatambudza nyika kubva kuma80s. Kune zvakare akati wandei madiki mamuseum, nharaunda dzemaraibhurari eruzhinji, uye nzvimbo dzetsika dzakadai seMoravia Cultural Center - zvese izvi zvinofema hupenyu kupinda muguta.
Medellin anogadzira akasiyana siyana egore-mhemberero vanopemberera tsika nemagariro. Pakati pezvakakurumbira zvinosanganisira: Mutambo weTango wepasi rose muna Chikumi, uyo unounza vatambi vane hunyanzvi kubva pasirese kupemberera tsika yeguta ine tango; Feria de las Flores muna Nyamavhuvhu, mutambo mukuru wekurangarira vanhu vepaMedellin paisa kuburikidza nezviitiko zvakati wandei zvakadai semakwikwi, mabhiza emabhiza, makonzati, pakati pevamwe; uye Mutambo weMwenje neKisimusi muna Zvita, chiitiko cheyakajairwa mwaka apo mabhizinesi nevanhu veko vanobatana mukupemberera mazororo nekuratidzira kwakanyanya mwenje mashoo uye kuratidzira mukati meguta.
Pamusoro pechipo chetsika, Medellin zvakare ine zvakawanda kune vanoda zvisikwa. PaParque Arví musango akachengetedzwa, vashanyi vanogona kuwana anopfuura zana nemakumi masere emhando dzemhando dzebromeliads, anthuriums uye orchids izvo zviri parumananzombe kutsakatika. Zvimwe zviitiko zvekunze zvevafambi zvinosanganisira kukwira, agritourism uye kuchovha bhasikoro. Chimwe chiitiko chakakurumbira ndeyekuona shiri uye shavishavi, izvo zvinogona kuitwa kuAlto de San Miguel nzvimbo yemhuka yemusango inopfuura ma160 2,000 maeka. Inofungidzirwa seimwe remaguta akanaka kwazvo uye ane mavara muColombia ndiGuatapé, iri maawa maviri kubva kuMedellin, iyo inopa zviitiko zvemvura uye yakakurumbira Piedra del Peñol, dombo hombe, rinokwira rinokwira kusvika mazana manomwe emamita uye rinotarisa nzvimbo inoyevedza negungwa pazasi.
“Medellin anovavarira kuve guta rine muenzaniso unokwezva vafambi vekunze. Guta raita budiriro inoshamisa mumakore makumi matatu apfuura, kunyanya nekuda kwevanoona vatungamiriri vehurumende vanga vakakosha mukushanduka kwekupa kwavo kwekushanya uye kukwezva kwepasirese. Tinokoka vafambi kuti vatishanyire, vararame zvakasarudzika zviitiko, vadzidze nezvedu nhoroondo uye vanakidzwe nezvatinokwezva kuti vagone kudanana nekwavari kuenda, "akadaro María Fernanda Galeano, Secretary of Economic Development weMedellin.
Gara pazvikomo zvemakomo maviri eAndean, Medellin ndiro guta guru redunhu reAntioquia - inzvimbo inozivikanwa zvikuru neminda yayo yekofi nemapurazi emaruva. Inozivikanwa seGuta reKusingaperi Chitubu nekuda kwayo inonakidza mamiriro ekunze avhareji pakati pe60 ° kusvika 80 ° F gore rese. Vashanyi vanogona kubhururuka vakananga kuMedellin Jose Maria Cordova International Airport nendege dzakananga kubva kunzira huru dzeUS dzinosanganisira Miami, Ft. Lauderdale neNew York.
India Yekufamba uye Yekushanya indasitiri inodonha